Madaxweynaha Puntland oo ku qaabilay Garoowe Safiirka Finland u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Puntland oo ku qaabilay Garoowe Safiirka Finland u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya
GAROOWE – Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa aqalka Madaxtooyada Garoowe ku qaabilay wafti ay hoggaaminaysay Safiirka Finland u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Miss.Tarja Fernandez waana markii ugu horeysay ay timaado Puntland.
Madaxweynaha Puntland ayaa kulanka waxa ku weheliyey mas’uuliyiin ka tirsan gollayaasha dowladda Puntland iyo saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Puntland.
Madaxweyne Gaas ayaa kulanka kadib warbaahinta u sheegay in Puntland iyo Finland ay leeyihiin xiriir aad u wanaagsan isla markaana ay wadashaqeyn ka dhaxayso.
Waxa uu sheegay Madaxweynuhu in Safiirka ay kawada hadleen mashaariicda horumarineed ee dawladda Finland ka fuliso Puntland iyo sidii loo sii horumarin lahaa uguna soo dhamaan lahaayeen guul.
Dhica kale Safiirka wadanka Finland u qaabilsan arrimaha Soomaliya Miss. Tarja Fernandez ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay wada shaqyanta Puntland iyo dalkeeda isla markaana ay sii wadidoonaan wadashaqayntaasi ay la leeyihiin Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya, waxaana ay intaasi raacisay in ay Puntland iska kaashadaan badiyaaba arrimaha caafimaadka.
Ugu danbayn Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa Dawladda Finland uga mahad naqay wadashaqaynta dhow ee ay la leeyihiin Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya, waxaana uu sheegay inay diyaar u yihiin joogtaynta iyo dardar gelinta wada shaqayntaasi.